Potpourris n Evolving Presentations utilizing Padauk font n Honoring the works of Martin & Debbie Hosken, Keith Stribley.
” စိန်ပြောင်း” ဆေးကြောကျွမ်းသူတို့ လုပ်ငန်း
Myint Soe said:
Laka Thang said:
တချိန်ကဆို ဆိုးရွားဆုံး – သာသနာ စာမျက်နှာတွေကို သူခိုးဖေါင့်နှင့်တောင် တင်ပြကြတာ။ အာပတ်သင့်မှာ ကြောက်လို့လား၊ လိပ်ပြာမသန့်ကြလို့လား မသိ ယခုတော့ မြန်မာဖေါင့်တွေနဲ့ မှန်ကန်စွာ သုံးကြတယ်။
ကျမလည်း ဒီအတုအယောင်ဖေါင့်ကို အစဦးကတည်းက သိတာ။ လမ်းပြဝက်ဆိုဒ် http://www.myanmarbible.com/documents/475.html က ပိတောက်ဖေါင့်ကို ၂၀၀၆ခုနှစ်က အသေးစိတ် တင်ပြပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်ရမည်။ အသိအိမ်ရောက်လို့ ဒီဖေါင့်တုကို ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်။ ပိုပြီးခက်တာ တွေ့ရတယ်။ မကောင်းတဲ့ဟာ ခက်ခက်ခဲခဲ သုံးချင်စိတ် အဲဒီတည်းက ကုန်သွားခဲ့တယ်။ ဖေါင့်အမှန် သုံးမှ ကမ္ဘာ့အဆင့် မှီလိမ့်မည်။
Hon. Ba Than Maung said: